Fampiharana 5 hanovana sary amin'ny Android hahagaga anao | Androidsis
Fampiharana 5 hanovana sary amin'ny Android hahagaga anao
Isaky ny finday avo lenta vaovao mivoaka eny an-tsena, ny fakantsary ampiarahin'izy ireo dia afaka manome sary miloko bebe kokoa. Be loatra ka, afa-tsy amin'ny fakantsary nomerika premium na matihanina indrindra, vitsy kokoa ny mpampiasa no manana fakantsary ankoatry ny finday avo lentaary. Androany, ny ankamaroan'ny mpampiasa dia mandray ny sarinay (sy horonan-tsary) amin'ny finday; Maka sary maro hafa izahay ary mahavariana ireo, na izany aza, azo atao tsara ihany koa ny manatsara sy manome azy ireo endrika am-boalohany kokoa aza.
Ho an'ity dia misy am-polony am-polony ny rindranasa hanonta sary misy ao amin'ny Google Play Store. Ho fanampin'izany, misy karazany isan-karazany, manomboka amin'ny matihanina indrindra ka hatramin'ny tsotra indrindra, maimaimpoana na karama, azonao atao ny manapaka, manova tamale, manampy sivana sy effets marobe, ao anatin'izany ny lahatsoratra, sarontava, tehina, emojis…. Na izany na tsy izany, tsy misy farany ny lisitra. Na izany aza, anio dia hanao ezaka izahay hampisehoana aminao izay mety hitranga ny sasany amin'ireo fampiharana fanovana sary tsara indrindra amin'ny Android. Azoko antoka fa tsy hanaiky an'ity fifantina ity ianao, koa aza misalasala manome anay ny tolo-kevitray ao amin'ny faritra misy ny hevitra.
4 Adobe Lighthop Lightroom
ny safidy fanovana maro izay atolotray, ary ho azy manamora ny fampiasana azy, Snapseed dia tsy afaka nanjavona tamin'ny lisitry ny fampiharana fanovana sary tsara indrindra. Fampiharana io tena malalaka, izay avy amin'ny tanan'ny Google mihitsy, ary izay tsy hahitantsika na dia ny dokambarotra na dia kely aza.
Afaka miaraka aminy isika ampifanaraho ny fifanoherana, ny famirapiratana na ny fifantohana ny sarinay, mampihatra betsaka vokany sy sivana, ary mampiditra lahatsoratra mihitsy aza. Tsy hita foana ny zavatra, ohatra, ny karazan-dahatsoratra maro karazana, ny sivana maro kokoa ... Saingy, mbola iray amin'ireo tiako indrindra io.
Fampiharana fanovana sary malaza iray hafa amin'ny Android dia ny "VSCO". Afaka miaraka amin'izany ianao maka sary amin'ny alàlan'ny fampiharana mivantana ireo preset natolotra anao; Izy io koa dia manana fifehezana mandroso ary misy toetra ara-tsosialy sasany satria mamela anao hizara ny zavatra noforoninao na hahita ny asa vitan'ny fiarahamonina.
Tsy misy fisalasalana ny zavatra tsara indrindra momba ny VSCO dia ny sivana, maro amin'izy ireo no aingam-panahy avy amin'ny sarimihetsika, izay manome izany mikasika ilaina sy voalanjalanja izany, fa tsy terena, izay tadiavinay ho an'ny sarinay.
VSCO: Mpanonta sary sy horonan-tsary
Ny fampiharana "PhotoDirector-Camera & Editor" dia tsy dia fantatrao loatra, na izany aza, azonao atao ihany koa ny ho anisan'ity klioba voafantina mpamoaka sary tsara indrindra ho an'ny Android ity.
Amin'ny lafiny ratsy dia azontsika atao ny manonona ny fisian'ny dokam-barotra (azonao atao ny manjavona rehefa mandoa) ary manana fitaovana sy fitaovana vitsy kokoa noho ny fampiharana hafa mitovy sokajy aminy izy; Mifanohitra amin'izany, tsara ny valiny misaotra ireo fanitsiana, blurs, mety hamafana zavatra sy singa (sy olona) fa tsy te hiseho amin'ny sarinao ianao.
Izy io koa dia teboka manohana azy fa manana a tena interface tsara sy mora ampiasaina, misy effet preset io, fanitsiana feo haingana sy mora, sns.
Adobe Lighthop Lightroom
Tsy azo atao ny mampiditra an'io fampiharana io amin'ireo mpamoaka sary tsara indrindra ho an'ny Android ary koa ho an'ny iOS. Ny interface dia tsy intuitive toy ny an'ny fampiharana teo aloha, mamela ny fanaraha-maso marina kokoa ny sary. Izy io dia manana preset azonao ampiharina amin'ny fikitika tokana sy ny fanovana mandroso. Azonao atao ny mandeha amin'ny fanandramana fanitsiana sy ny vokany araka izay tianao ary tsy manahy ianao satria afaka miverina amin'ny voalohany ianao amin'ny fotoana rehetra.
Adobe Lightroom: Amboary ny sary
Ary mamarana ny «Photo Lab» izahay, tonian-dahatsoratra mora ampiasaina be ho an'ny Android. Manana a sivana, effets, photomontages, sary, frame, frame be dia be azonao atao ny mampihatra ny sarinao mba hanomezana azy ireo endrika am-boalohany kokoa, ary ambonin'izany rehetra izany, mahafinaritra kokoa. Misongadina manokana ny sokajy "Background Artistic", izay hahazoanao valiny tsy mampino. Manana doka izy fa raha maharesy lahatra anao izy dia azonao esorina amin'ny fividianana ny pro pro.
Photo Lab: mpamoaka sary
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Fampiharana 5 hanovana sary amin'ny Android hahagaga anao
Ny lalao Final Fantasy tsara indrindra ho an'ny Android